Iwo akanakisa mapikicha e iPhone ari mune ino app | IPhone nhau
Vellum, chirongwa chine mapikicha akanaka senge hupenyu pachahwo
Chimwe chezvikamu chinowanzosiyana pane yedu iPhone ndeye Wallpaper. Isu tese tinoda kuve ne Wallpaper inonakidza kwatiri Uye, nekuda kwekushandisa kwakawanda kwatinopa kune yedu smartphone, zvakajairika kuti iyo yatinayo chero panguva ipi inopera inotinetsa nekufamba kwenguva. Inguva yekuchinja yako Wallpaper? Ichi chishandiso ndizvo zvauri kutsvaga.
Vellum ndechimwe cheakanakisa mashandisirwo maererano nemadziro ayo andakakwanisa kuwana munguva dzichangopfuura. Kazhinji, zvinotora nguva yakareba kusarudza Wallpaper iyo yandinoda zana muzana (muchokwadi, ini ndinokahadzika kuti iripo), sezvo zvinhu zvakaita sekuenzanisa kana mhando yemifananidzo ine pesvedzero huru muchisarudzo chekupedzisira. Kana, seni, uchinetseka zvakanyanya nezve izvi zvinhu, uri muhombe.
NaVellum tinogona kuwana mifananidzo yemhando inosangana nezvinodikanwa zvekuita zvinoita kuti ive yakanaka kune yedu iPhone. Sezvo mumunda wekuravira hapana chakanyorwa, mukati meapp tinogona kuwana akasiyana mapoka izvo zvinotibvumidza isu kuti tiwane mufananidzo nekukurumidza zvakanyanya maererano nezvatinoda. Pamusoro peizvi, ine zvimwe zvakanaka kwazvo zvinhu, sekukwanisa kuwana ratidzo yekuti mifananidzo yaizotaridzika sei sepashure pese pakakiya uye pachikona chekumba - tichidzivirira kuzviita neruoko kutiponesa isu yakawandisa nguva - kana iyo iyo inokutendera iwe kuisa chiitiko akamhanya kana kudzikatidzwa kunatsiridza kuratidzwa kwemifananidzo pane iyo inotenderera.
Zvichava zvakaoma kuti pakati pemapoka gumi nemashanu hatingawani chifananidzo chinova yedu nyowani Wallpaper, nokudaro kuve imwe yeanokosha mafomu iyo kwemwedzi mishoma haigone kushaikwa pane yangu iPhone. Pamwe, haifanire kunge isipo pane yako futi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Vellum, chirongwa chine mapikicha akanaka senge hupenyu pachahwo
Iyo iPhone 8 ichave iri diki asi nebhatiri reiyo Plus